Amakheli E-imeyili Ochwepheshe Database lakamuva Lokuposa
Database lakamuva Lokuposa » Amakheli E-imeyili Ochwepheshe
Ochwepheshe imeyili ye-imeyili ye-Ochwepheshe
Ikheli le-imeyili leProfesa lizokusiza ukuthi ufinyelele kubaprofesa base-USA univercity. Ungasebenzisa lolu hlu lwe-imeyili lobu profesa ukukhulisa ukuthengiswa komkhiqizo wenkampani yakho. Ikheli le-imeyili likaProfessor liqukethe bonke ochwepheshe be-imeyili ye-EDU, inombolo yocingo, igama likaprofesa njll.
Wonke umfundi kufanele axhumane noprofesa abahle, Ngabe ufuna ukuxhumana nalabo abasezifundweni, ukumaketha isixazululo semfundo, ukuqoqa imibono yesazi, noma umane nje uthole abantu abazothakazela kakhulu umkhiqizo okhethekile? Landa i-database enkulu egcwele imininingwane ebalulekile yokuxhumana yoprofesa eminyangweni nasezikhungweni eziningi. Ngawe ungakha uhlu lokuhola oluhlosiwe futhi uxhumane nabantu ababalulekile kochwepheshe bebhizinisi lakho. Siku-Porter wena ikheli le-imeyili elivumelekile nelokungena kwakho.
Lapha ungathola izeluleko ezimbalwa zokuthi ungaxhumana kanjani noprofesa, abasizi kanye nabaphathi ngendlela enenhlonipho. Sebenzisa ikheli lakho le-imeyili lomfundi.
Thenga Amaphrofayili E-imeyili Amaphrofayili we-EDU Hlela
Amakheli e-imeyili oprofesa be-EDU azokusiza ukuthi ufinyelele kubo bonke oprofesa ku-Collage yase-USA kanye ne-univercity. Ochwepheshe inketho enhle kakhulu yokuthengisa imikhiqizo yakho ehlobene nemfundo. Ungathumela okunikezwayo kwenkampani yakho noma izindaba kubaprofesa be-Univercity base-USA.
Ungasebenzisa lolu hlu lwamakheli ukufinyelela kuzo zonke izinhlobo zabaholi bezemfundo ephakeme: amaChancellors, oMongameli, amaDeans, izihlalo zoMnyango kanye namanye amaPhoyisa Ezifundazwe, ama-Admissions / Abaqondisi Bokusiza Ngezezimali, ONgqongqoshe kanye Namalungu E-Faculty, kanye namaLayibrari.
Imininingwane etholakala kulolu hlu lwemibhalo ye-inthanethi angeke isetshenziselwe ukunikezela amakheli wokuthumela ngeposi kwi-University kitektri, abasebenzi, kanye / noma abafundi.Ngokanye uhlu lwamakheli imeyili oluhleliwe oluvela, ungathintana nezithameli zakho ezihlosiwe ngezindlela eziningi ezahlukahlukene, ngoba ifaka yonke imininingwane ebalulekile yokuxhumana: ama-imeyili, izinombolo zocingo, amakheli, izihloko, nokuningi.
Inani lamarekhodi: 135,000
Ochwepheshe be-imeyili ye-imeyili ye-Profesa Umbuzo Nempendulo